फोहोर ब्यवस्थापन नहुदाँ स्थानीयहरु आक्रोशित – Tanahun Khabar
फोहोर ब्यवस्थापन नहुदाँ स्थानीयहरु आक्रोशित
हरि खरेल / दुलेगौडा । लामो समय देखि नगरपालिका भित्रको फोहोरलाई ब्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका भित्रका नगरवासीहरु आक्रोशित भएका छन् । नगरपालिका क्षेत्रबाट संकलन भएका फोहोर बस्ती नजिकै जलाएर आफुहरुका स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरेको भन्दै वडा न ७ भोटेपानीका स्थानीयहरु आइतबार आक्रोशित बनेका हुन् ।
बस्ती नजिकै फोहोर जलाउन बन्द गर्नुपर्ने भन्दै भोटेपानीका स्थानीयहरुले आफुहरुको माग सुनुवाई नभएको भन्दै नगरपालिकाका विरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार फोहोर जलाउँदा समस्या उत्पन्न भएको गुनासो सहित नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण गराउन आएका एक टोलीले नगरपालिकाको कार्यालय भित्र फोहोर जलाउनेसम्मको कार्यक्रम तय गरिने बताए । टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका भोटेपानीका राजेन्द्र ढुंगानाले जनप्रतिनिधीहरुका नै समस्या समाधान गर्न गम्भिर नभएको गुनासो गरे ।
आफुहरुले विगत २ बर्ष देखि फोहोरको धुवाका झेल्दै आएको तर नगरले कुनै चासो नदिएको गुनासो गरे । “अर्काे आईतबारसम्म फोहोर व्यवस्थापनमा केही कार्य भएन भने मेयर उपमेयर सबै भएको ठाउँमा, नगरपालिका भित्र ल्याएर प्लाष्टिक जलाईन्छ ।” स्थानिय युवा ढुङ्गानाले भने “प्लास्टिकको गन्दा कस्तो आउदो रहेछ, त्यो उनिहरुले पनि थाहा पाउन् । त्यो समस्या हामीलाई मात्र नहोस ।”
अन्य ठाउँको फोहोर आफ्नो ठाउँमा ल्याएर फ्याक्ने र धुवा, प्रदुषण पनि आफुहरु स्वयमले बेहोर्नुपर्ने भन्दै युवाहरुले गुनासो गरेका छन् । आफ्नो घरमा विरामी भएका वृद्ध बुबा आमाहरुले फोहोरको धुँवाले प्रभाव पारेको बताए । “हामी पहिला तपाईसंग कुरा गर्नका लागि केही युवाहरु मिलेर आईयो,” ढुङ्गनाले वातावरण शाखा प्रमुखलाई राजेन्द्र सोतीलाई भने,“ अब नगरले फोहोरको व्यवस्थापन नगरेका हामीहरु उग्र रुप लिने छौ । ”
आफुहरुले बाराम्बार फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि नगरमा प्रस्ताव राखेता पनि आफुहरुको कुरा सुनुवाई नभएको स्थानीय युवा अमृत कायस्थले बताए । अव्यवस्थित रुपमा फ्याकिएका फोहोरमा आगो लाग्दा आफु स्वयमले समेत डोजर लगाएर पुर्ने कार्य गरेको बताए ।
नगरमा जनप्रतिनिधिकै कारण आफुहरुले काम गर्न नसकेको वन तथा वातावरण शाखा प्रमुख राजेन्द्र सोतीले बताए । यदि वातावरण शाखाले उक्त क्षेत्रमा फोहोर फ्याक्न रोक्ने हो भने पनि फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान नहुने बताए । यसको लागि वडाले नै निवेदन लेखेर फोहो फ्याक्न बन्द गर भन्छ भने हामी तत्काल उक्त ठाउँमा फोहोर फ्याक्न रोक्ने बताए । नगरले संकलन केन्द्र संञ्चालन गर्नका नसकेको र सम्पुर्ण वडाहरुमा पनि फोहोर ब्यवस्थापन गर्न उचित ठाउँ नभएका कारण समस्याहरु झेल्दै आएको बताए ।
करिब ३ बर्ष बित्न लाग्दासम्म पनि नगरले वैकल्पिक व्यवस्थापन भन्दै संकलित फोहोर नगरकै वडा नं. ४ र वडा नं. ५ को खुल्ला चौर खोल्सा अव्यस्थित रुपमा राख्दै आएको छ । नगरले संकलन केनद्र निर्मााण गरेको साढे २ बर्ष हुदाँ पनि प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन् । केहि समय अगाडी शुक्लागण्डकीका मेयर किसान गुरुङले तनहुँ खबरसंग कुराकानी गर्दा माघ ५ गतेको नगर सभापछि फोहोरको समस्या समाधान गर्ने भनेका थिए, तर जनताहरु भने फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान भन्दै नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता अझसम्म पनि रहेको छ ।
चौथो मनास्लु राष्ट्रिय अवार्डद्वारा तनहुँका गायक खाती सम्मानित